किन २०१ 2016 मोबाइल अर्थव्यवस्थाको लागि ग्लोबल टिप्सिंग पोइन्ट हुनेछ Martech Zone
अन्टार्कटिकाका वैज्ञानिकहरूले मोबाइल गेमहरू डाउनलोड गर्दैछन्। सिरियाका अभिभावकहरू बच्चाहरूलाई धेरै प्राविधिक प्रयोग गर्ने बारे चिन्ता गर्छन्। अमेरिकी सामोआमा टापुका मानिसहरु G जी संग कनेक्ट हुन्छन्, र नेपालमा शेर्पासहरु smart 4-पाउन्ड भारहरु लग्डिंग गर्दा उनीहरूको स्मार्टफोनमा च्याट गर्छन्।
मोबाइल अर्थव्यवस्था हो ग्लोबल टिपिंग पोइन्टमा पुग्दै.
एरिक्सन र TUNE बाट डाटाको साथ ग्लोबल मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू
हामी हरेक समय ठूला नम्बरहरू सुन्छौं। यस बर्ष विश्वव्यापी रूपमा स्मार्टफोनका साथ million०० मिलियन नयाँ ग्राहकहरू। २०१ 800 मा million०० मिलियन। यो सबै विद्यमान स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूसँग थप्नुहोस्, र २०२० सम्ममा यस क्लबका 600..2016 बिलियन सदस्यहरू हुनेछन्।
२०१ 2015 मा लगभग% 47% ग्रहको स्मार्टफोन थियो एरिक्सन डाटा। २०१ 2016 मा, त्यो संख्या blow०% को अंकन नजिक उड्नेछ, करीब billion अर्बको नजिक। अर्को शब्दमा, विश्वको जनसंख्या भन्दा छिटो बढ्दै, जुन वर्तमानमा करीव 50..4 बिलियन छ।
TUNE कुनै पनि अन्य देशहरू भन्दा भारतबाट अधिक m-वाणिज्य र शपिंग डाउनलोडहरू देख्दछ, समानुपातिक रूपमा।
यही कारणले अमेरिकामा सयौं लाखौं स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरू बाहेक, विकसित संसारका अनुप्रयोगहरूमा खर्च गरेको मोबाइलको% 86% समय, m- वाणिज्यको द्रुत बृद्धि अमेरिकामा अन्तिम केहि क्वार्टरमा र भारतको मोबाइल पहिलो विश्वमा एम-वाणिज्यको विशाल भूमिका (साथै केही हदसम्म चीन) पनि ... हामी विशाल मोबाइल शिफ्टमा निर्णायक घडी देखिरहेका छौं जुन विकासकर्ताहरूले गरेका छन्। तर्फ काम गर्दै, बजारहरू सुन्ने छन्, र ब्रान्डहरू अपेक्षित छन्।
यस बिन्दुको बारेमा के खास छ?
As GameStop, उदाहरण को लागी, मलाई भन्यो: तपाईको अनुप्रयोग प्रयोग गरी रहेका ग्राहकहरु तपाईको उच्च मानको वफादारी क्लब ग्राहकहरु लाई दुबै लायक छन्। र, एक मोबाइल प्रथम अर्थव्यवस्था सबै प्रकारका नयाँ अवसरहरू सक्षम गर्दछ। हामीले उबेर, एयरबिएनबी, अमेजन, र यस्तै अन्य मोबाइल अनुप्रयोगहरूको शीर्षमा निर्मित ग्लोबल उद्यमहरूमा यसको पहिलो झलक देख्यौं। अर्को तरंग सेफोरस, सोनीस, स्टेपल्स, र अन्य ठूला ब्रान्ड र उद्यमहरू हुन् जुन उनीहरूको अनुयायीहरू, प्रयोगकर्ताहरू, जनजातिहरू, वा ग्राहकहरूसँग पहिले एक-बाट-अर्को मार्केटि and र ग्राहक सम्बन्ध विकास गर्दैछन् ... र त्यसपछि अवधारणाको नयाँ अवधारणालाई पुनर्जीवित गर्न सुरू गर्दछन्। तिनीहरूको व्यवसायको मोबाइल मोबाइल पहिलो अर्थव्यवस्थामा के अर्थ हुन्छ।
खेलहरू विशाल छन्। तर हामी उदार मोबाइल अर्थव्यवस्था शपिंग, यातायात, जीवनशैली, र सामाजिक अनुप्रयोगहरूमा देखिरहेका छौं।
ड्रोन वितरण? सायद अहिले नै होईन।
तर उबर-एडेड-मात्रै-मात्र स्टेपल्सबाट अफिस आपूर्तिको समयमा डेलिभरी जुन अमेजन-प्रबन्धित वितरण केन्द्रमा केहि घण्टासम्म बाँच्न सक्छ? यस्तो केहि भविष्यमा अहिलेसम्म छैन।
मोबाइल गेमिंग दिग्गजहरू जस्तै सुपरसेल, काबाम, मेसिन जोन, इलेक्ट्रोनिक कला, र किंगले मोबाईलमा पैसा कसरी कमाउने भनेर विश्वलाई पहिलो दर्शायो। तर विश्वको $०-१००० बिलियन डलर केवल केही वर्षमा in-app खरीद मा खर्च हुनेछ द्वारा dwarfed गरिनेछ -500 550-XNUMX अरब यो गैर-भर्चुअल सामानहरू र मोबाइल उपकरण मार्फत खरीद गरिएका सेवाहरूमा खर्च गर्दछ तर वितरित हुन्छ, केही स्तरमा, वास्तविक विश्वमा।
र त्यो वास्तविकतामा, पहिलो मोबाइल हुनु फलिफोरको बारेमा हुँदैन। यो बाँच्न को लागी हुनेछ।
यो पोष्ट एक रिपोर्ट मा आधारित छ ट्यून.
यहाँ पूर्ण रिपोर्ट डाउनलोड गर्नुहोस्!
टैग: ब्रान्डहरुखेलm- वाणिज्यमोबाइल अनुप्रयोगहरूमोबाइल अर्थव्यवस्थापहिले मोबाइलमोबाइल मार्केटिङस्मार्टफोनधुन
संगठनहरूलाई सामाजिक बिक्री रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्नबाट के रोकिरहेको छ?